Qasaaraha ka dhashay qaraxyo lagu dili rabay Madaxweynaha cusub.
Wararkii u dambeeyay ee aanu ka heleyno Hoteelka Jasiira ee magaalada Muqdisho oo Qaraxyo ay maanta gilgileen ayaa waxa ay sheegayaan in dhimashada iyo dhaawaca qaraxyadaasi ay sii korortay.
Qaraxyada oo ahaa kuwa ismiidaamin oo lala damacsanaa in lagu qaarijiyo Madaxweynaha Cusub Xasan Sheekh Max'ud oo Hoteelka kula shirayay Wasiirka arrimaha dibadda Kenya iyo xubno kale ayaa waxaa ku dhintay 7 ruux oo isugu jira askarta dowladda iyo AMISOM halka in ka badana ay ku dhaawacmeen.
Qaraxa koowaad markii uu dhacay ayaa waxaa ka dambeysay rasaas Daqiiqado Socotay oo ay is waydaarsadeen Ciidamadii Goobta ku sugnaa iyo Kooxo hubeysan oo la socday raga isqarxiyay iyadoo qaraxa labaadna uu dhacay Daqiiqado ka dib .
Waxaa durba goobta Xiray Ciidamada Dowlada iyo kuwa AMISOM iyadoo halkaana ay si dhaqso ah u gaareen Saraakiisha Ciidamada oo dhan iyo Ciidamo Fara badan kuwaas oo isku gadaamay Hotelka dadka iyo gaadiidkana u diidaya in ay wadada adeegsadaan.
Al Shabaab ayaa la rumeysan yahay inay ka dambeeyaan weeraradaani isqaraxinta oo looga bartay inkastoo aysan war rasmi ah kasoo saarin hase ahaatee Shabaab ayaa waxa ay sheegeen in Madaxweyne Xasan Sheekh uu la mid yahay Madaxweynayaashii hore ayna la dagaalamayaan dowladiisa.